Ndị a gbaghaara mmehie ha na-enwe obi ụtọ
‘M kwupụtaara gị mmehie m’ (5)
Chineke ga-eme ka ị mara ihe (8)
Abụ Devid. Maskil.* 32 Onye Chineke gbaghaara ihe ọjọọ o mere, ya bụ, onye e kpuchiri* mmehie ya, na-enwe obi ụtọ.+ 2 Onye Jehova weere ka onye ikpe na-amaghị,+Ya bụ, onye na-anaghị aghọ aghụghọ, na-enwe obi ụtọ. 3 Mgbe m gbara nkịtị, ike gwụruru m n’ọkpụkpụ maka na m nọ na-asụ ude n’akwụsịghị akwụsị.+ 4 N’ihi na ma n’ehihie ma n’abalị, iwe ị na-ewesa m* na-anyịgbu m ka à ga-asị na ọ bụ ibu dị arọ.+ Ume dị m n’ahụ́ gwụrụ ka ebe anwụ mịkọọrọ mmiri n’oge ọkọchị. (Sila) 5 M mechara kwupụtara gị mmehie m. Ekpuchighị m njehie m.+ M sịrị: “M ga-ekwupụtara Jehova ihe ọjọọ ndị m mere.”+ Ị gbaghaara m mmehie m niile.+ (Sila) 6 Ọ bụ ya mere onye ọ bụla nke jisiri gị aka ike ga-eji rịọ gị arịrịọ n’ekpere+Mgbe a ka nwere ike ịchọta gị.+ Mgbe ahụ, nsogbu ndị yiri idei mmiri agaghị eru n’ebe ọ nọ. 7 Ị bụụrụ m ebe nzuzo. Ị ga-echebe m n’oge nsogbu.+ Ị ga-eme ka ndị ga-eti mkpu ọṅụ maka na ị napụtala m gbaa m gburugburu.+ (Sila) 8 “M ga-eme ka ị mara ihe, zikwa gị ụzọ i kwesịrị iso.+ M ga-enye gị ndụmọdụ, anya m ga-adịkwa n’ebe ị nọ.+ 9 Unu emela ka ịnyịnya ma ọ bụ jakị na-anaghị aghọta ihe,+Nke ị ga-ejirịrị eriri ma ọ bụ ụdọ dọrọTupu ya abịa gị nso.” 10 Onye ajọ omume na-atagbu onwe ya n’ahụhụ. Ma ịhụnanya Jehova na-echebe onye tụkwasịrị ya obi.+ 11 Unu ndị ezi omume, ṅụrịanụ ọṅụ n’ihi Jehova, nweekwanụ obi ụtọ. Tienụ mkpu ọṅụ, unu niile ndị obi ha dị ọcha.
^ Ma ọ bụ “aka gị.”